धेरै अवस्थामा उद्धार जरुरी हुँदैन - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
लेक लागेकालार्इ तत्काल नजिकैको अस्पताल पुर्याउँदा अधिकांश निकाे हुन्छन्
नरेन्द्रदेव भट्ट असार ३१
हिमाल आरोहण गर्ने, ट्रेकिङ गर्ने पर्यटकहरुलाई धेरै जस्तो अवस्थामा उद्धार गर्नु पर्ने हुँदैन। लेक लागेका बिरामीको समस्या नजिकैको अस्पताल पुर्याउँदा निको हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।
करिब ५० वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालमा टे किङ, पर्वतारोहणका लागि धेरै विदेशी आउँदैनथे। त्यतिबेला पर्वतारोहणमा आउनेहरुमा जापानी बढी थिए। यो सन् १९७० तिरको कुरा हो। ट्रेकिङ, पर्वतारोहणका लागि आउने जापानीहरु हिमालको दृश्य देखेर रोमाञ्चित हुन्थे। तर नेपालको उच्च हिमाली भागमा पदयात्रामा जाने उनीहरु बिरामी पर्न थाले। तन्दुरुस्त मान्छे पनि उचाइमा पुग्दा बिरामी हुन्छ। यस्तो किन भयो भनेर खोज गर्दै जाँदा थाहा भयो उच्च हिमाली भेगमा जाँदा शारीरिक तथा मानसिक अवस्थामा परिवर्तन हुँदो रहेछ। उचाईसँग शरीरलाई ‘एक्लेमटाइज’ गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो। उच्च हिमाली भेगमा आउने समस्यालाई लेक लाग्नु भनेर स्थानीयले भन्दै आएका छन्।
जापानी पर्यटक लेक लागेर बिरामी परेसँगै लोकप्रिय ट्रेकिङ रुटमा उपचारको व्यवस्था गर्ने, अस्पताल बनाउने योजना सुरु भए। जापानी र नेपाली मिलेर उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा घुम्न आएका पर्यटकलाई उपचार गर्ने तथा पर्वतीय पर्यटनको विकास गर्न सन् १९७३ मा हिमालय उद्धार संघ स्थापना भएको हो। नेपालमा पर्वतरोहण गर्नेहरु अधिकांश विदेशी पर्यटक हुने गर्छन्। उनीहरुलाई नेपालको सगरमाथा, अन्नपूर्ण लगायतका हिमालबारेमा थाहा हुन्छ। त्यो उचाईमा पुग्दा के समस्या आउँछन् कमै थाहा हुन्छ।
सम्बन्धित खबर: फेक रेस्क्युकाे ठगी धन्दा: कति किसिमले हुन्छ लुट? (भाग-२)
हिमाल, पहडमा जाँदा लेक लाग्नेजस्ता समस्याबारे जानकारी दिन संघले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। हिमाल आरोहण गर्न जानेहरुलाई हामीले चेतनामूलक ब्रोसर बनाएरै वितरण गर्ने गरेका छौं। लेक लाग्नु भनेको के हो? कुन ठाउँमा लेक लाग्ने सम्भावना हुन्छ? त्यसको लक्षण के हुन सक्छ? कसरी यसको उपचार गर्न सकिन्छ? यो पर्यटक आफैले थाहा पाउन सक्छन्। त्रिभुवन विमानस्थलबाट लुक्लाका लागि उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनी, अन्नपूर्ण जाने पर्यटकहरुलाई पोखराको नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालयबाट हामीले ती ब्रोसर पर्यटक समक्ष पुर्याउने गरेका छौं। लेक लाग्न नदिने र लागेको खण्डमा उपचार गर्ने गरी यो संस्था स्थापना भएको हो। लेक लाग्नु भनेको अक्सिजनको मात्रा कम र एयर प्रेसर कम हुनाले लाग्ने गर्दछ।
स्वास्थ चौकी स्थापना
हिमालय उद्धार संघले जपानीको सहयोगमा लेक लाग्नेहरुलाई उपचार गर्नका लागि सन् १९७३ मा सोलुखुम्बुस्थित फेरिचेमा स्वास्थय चौकी स्थापना गर्याैं। यो स्वास्थ्य चौकी ४ हजार २ सयर ३० मिटरको उचाईमा अवस्थित छ। त्यतिबेला अहिले यसबाट धेरै विदेशी पर्यटकले सेवा पाएका छन्। स्थानीय बासिन्दा पनि खुशी छन्। हामीले फेरिचमा स्वास्थ्य चौकी बनाउँदा अरु उपचार केन्द्र त्यहाँ थिएनन्।
सम्बन्धित खबर: ‘फेक रेस्क्यु’ को डरलाग्दो धन्दा
पहिलो प्रयास सफल भएपछि सन् १९८१ मा हामीले अन्नपूर्ण हिमाल जाने बाटोमा अर्को स्वस्थ्य चौकी स्थापना गर्याैं। मनाङ हुँदै अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्म ट्रेकिङ र पर्वतारोहण गर्न जानेको भिड बढेको थियो। त्यो मनाङ स्वस्थचौकी ३ हजार ५ सय ५० मिटर उचाईमा छ। उचाईमा स्वास्थ चौकी रहेकाले पर्यटकहरुले विरामी भएकै कारण आफ्नो यात्रा बीचैमा छोड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भयो। यी स्वास्थ्य चौकीमा विदेशी स्यवंसेवी चिकित्सको विशेषज्ञ सेवा समेत उपलब्ध हुने हुनाले हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरुप्रति पर्वतारोहीको ठूलो भरोसा रहन्थ्यो। यी बाहेक लेक लाग्ने समस्या हुने अन्य स्थानमा समेत संघले क्याम्प सञ्चालन गर्छ। सन् १९९८ देखि रसुवाको ४ हजार ३ सय ८० मिटर अग्लो गोसाइँकुण्ड मेलाको समयमा पनि हामीले क्याम्प राख्दै आएका छौं। यसले गर्दा पदयात्राका लागि नेपाल आउने पर्यटकलाई नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदै आएको छ।
पछिल्लो समय सगरमाथा आरोहणमा आउनेहरुको संख्या पनि बढेको छ। पर्वतारोहीको संख्या वृद्धि भएसँगै बिरामी हुनेहरुको संख्या बढ्नु स्वभाविक हो। त्यसलाई ध्यानमा राख्दै सन् २००३ मा सगरमाथाको आधारशिविरमा स्वास्थ शिविर सञ्चालनमा ल्याएको थियौं। जुन अहिले पनि सञ्चालनमा छ। ५ हजार ३ सय ५० मिटर उचाईमा रहेको स्वस्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि ९० हजार अमेरिकी डलरको टेन्ट हामीले विदेशी सहयोगीबाट पाएका थियौं। यो टेन्टमा नै हामीले १५ वर्षदेखि स्वास्थ शिविर सञ्चालन गर्दै आएका छौं। यो टेन्ट हामीले पायौं तर सगरमाथाको आधाशिविरसम्म पुर्याउन त्यती सहज थिएन। साथीहरुले १९ लाख खर्च लगाएर टेन्टलाई सगरमाथाको आधारशिविरसम्म पुर्याए। त्यो टेन्ट त्यहाँ पुर्याउन जति दुःख भयो त्यो दुःख हामीले क्षण भरमै बिर्सियौं। किन कि त्यहाँ हाम्रो कारण धेरै पर्वतारोहीले सेवा पाउने निश्चित थियो। हामीले आफ्नो स्वास्थ चौकीबाट वर्षमा ४५ सयको हाराहारीमा विरामीलाई सेवा दिदै आएका छौं। तीमध्ये ७५ प्रतिशत नेपाली र २५ प्रतिशत विदेशीले सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन्।
सम्बन्धित खबर: फेक रेस्क्युको अनुत्तरित प्रश्न: कति रकम हुन्छ अबैध असुली? (भाग-१)
हिमालयन उद्धार संघ नेपाल एक मात्र त्यस्तो संस्था हो, जसले पर्यटकहरुलाई विरामी परेर उद्धार गर्ने अवस्था नआवस भनेर काम गर्छ। उद्धारमा हुने कठीनाइ र खर्चलाई मध्यनजर गर्दै हामीले विदेशी शुभचिन्तकका सहयोगबाट यस्तो काम गर्दै आएका छौं। उद्धारलाई अझ व्यवस्थित गर्न नेपाल माउन्टेन रेस्क्यु ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणको काम भइरहेको छ।
हाम्रो यो कार्य देखेर युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतका डाक्टरहरु नेपालमा आएर बिना पैसा विरामीको उपचार गर्ने गरेका छन्। उनीहरु केही महिनाका लागि आउँछन्। नेपाली, विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिन्छन्। हाम्रो हरेक स्वास्थ चौकीमा अक्सिजन प्रसस्त मात्रमा छ। गेमो ब्याग, अक्सिजन लगायतका सुविधा हाम्रो हस्पिटलमा रहेको छ। अक्सिजनका अभावन नहोस भन्नका लागि अक्सीजन सञ्चय गर्न अस्ट्रेलिया सरकारले हामीलाई सहयोग बापत मेसिन दिएको छ। स्वास्थ चौकीमा सोलार सिस्टम जडान गरेको छ।
धेरै अवस्थामा उद्धार गर्नु पर्दैन
हिमाल आरोहण गर्ने, ट्रेकिङ गर्ने पर्यटकहरुलाई धेरै जस्तो अवस्थामा उद्धार गर्नु पर्ने हुँदैन। लेक लागेका बिरामीको समस्या नजिकैको अस्पताल पुर्याउँदा निको हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। उद्धार गर्नु परे पनि हामी आफैँले उद्धारको काम गर्दैनौं। उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो अस्पतालमा आएका विरामीलाई हामी सेध्छौं। कुन ट्राभल, ट्रेकिङ एजेन्सीबाट आएको हो ? त्यसपछि त्यो कम्पनीलाई फोन गर्छाैं। कम्पनीले हेलिकोप्टर ल्याएर उद्धार गर्नु पर्ने हो कि के हो त्यो थप काम आफ्नो तरिकारले गर्छ। आफैँ आएको भए सम्बन्धित दूतावासलाई खबर गर्दिन्छौं।
प्रकाशित ३१ असार २०७५, आइतबार | 2018-07-15 15:32:12
नरेन्द्रदेव भट्ट हिमालय उद्धार संघ नेपालका अध्यक्ष हुन्
नरेन्द्रदेव भट्टबाट थप
काठमाडौं, असोज २७ - विश्वकै सबैभन्दा चर्चित सामाजिक सञ्जाल कम्पनी फेसबुकले आफ्ना करिब २ करोड ९० लाख प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणमा ह्याकरको पहुँच रहेको जनाएको छ।
अन्तरिक्षको फोहोर बटुल्न पृथ्वीको ३ सय किमीमाथि आकासमा जाल बिछ्याइयो
यस्ता छन् भिआइपीका दसैं योजना
झापाका चिया मजदुरलाई आएन दसैं, व्यवसायीले दिएनन् तलब
घुस्याहाले भरियाे अख्तियारको हिरासत, डिएसपी र सहसचिवकाे दसैं पनि थुनामै
जनताले फालेको राजतन्त्रलाई यति सुविस्ता, यति सम्मानका साथ दुनियाँमा कहीँपनि बस्न दिइएको छैन, बस्न दिइएको हुँदैन। तर नेपालमा हामीले अत्यन्त उदार,...
इन्टरपाेलले दुबर्इमा पक्राउ गरेका सुन तस्कर गाैशालामा: ‘ठूला माछा’ बयान बाहिर
प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सहयोगमा दुबईबाट पक्राउ गरेका सुन तस्करी ‘सप्लाई चेन’का मुख्य अभियुक्त बेनु श्रेष्ठले...